Lazain’ilay Mpikatroka Manohitra Fanonganam-Panjakana Fa Mandrahona Hanolana Azy Ireo Thai Manampahefana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2014 3:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, polski, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Vitan'i Natchacha Kong-udom, mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, sy Sirawit Seritiwat, mpikambana manana ny hajany ao amin'ny “Thai Student Centre for Democracy (TSCD)” ny nampiseho ilay fomba fiarahàba amin'ny rantsana telo, izay lazain'ny miaramila mpanongam-panjakana ho fandikàn-dalàna, teo anatrehan'ireo mpanao gazety marobe, ny mpitandro filaminana ary ny vahiny nasaina nanatrika ny hetsika ho an'ny Andro Erantany Ho An'ny Zon'olombelona tao Bangkok ny 10 Desambra. Ny National Human Rights Commission (NHRC) – Kaomity Nasiônaly mimba ny Zon'Olombelona – ao Thailand no nikarakara ilay hetsika.
Noraisin'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana ilay fomba fiarahabana malazan'ny “Hunger Games” , taorian'ny nanilihan'ny tafika ny governemantan'i Yingluck Shinawatra tamin'ny volana May lasa teo. Fandikàn-dalàna hoy ny tafika ny fanaovana hetsi-panoherana sy fanakianana ny politikan'ny miaramila mpanongam-panjakana.
Tratry ny tsy nampoiziny tamin'ity fanapahàn-teny tampoka nataon'ny mpianatra ity i Amara Pongsapich, filohan'ny NHRC hatramin'ny 2009. Nentina niala ny faritry ny NHCR ry Kong-udom sy Seritiwat ary nentina nankany amin'ny biraon'ny polisy noho ny fandàvana ny fandraràna napetraky ny Filankevi-pirenena momba ny Fandriampahalemana sy Filaminana. Araka ny lazain'ny filankevitry ny tafika mpanongam-panjakana, mety hitondra any amin'ny olana ara-pandriampahalemana ho an'ny firenena ny fihetsika maneho fanoherana.
Nomarihany fa rehefa tsapany fa nisy nanaraka izy tao amin'ny lanonan'ny NHCR dia nijanona hanontany ilay lehilahy nampiahiahy azy, “พี่มาทำอะไรค่ะ ตามหนูมาตลอดเลย,” izay midika hoe, “Inona no ataonao eto ranadahy? Manaraka ahy foana ianao isak'izay mihetsika.” Novalian'ilay lehilahy hoe “ก็ตามมาข่มขืนน้องไง,” izay midika hoe “Hanandrana hanolana anao.” Teo anatrehanà vavolombelona maro no natao ilay fandrahonana, isan'izany ireo tomponandraikitry ny NHCR sy ny mpanao gazety.
Plainclothes officials threatened to rape student activist after she staged 3-finger salute protest at #Thailand Human Rights Commission.
Kong-udom nilaza tamin'ny Prachatai, tranonkalam-baovao iray tsy miankina, fa nisy mpikatroka hafa narahan'olona mampiahiahy ihany koa:
Kong-udom, izay olona nanova taovam-pananahana, no voalohany voasambotra teo anoloan'ny trano fijerena sarimihetsika tao Bangkok tamin'ny 20 Novambra tamin'ny nanaovany fiarahabàna Hunger Games nandritry ny fotoana fohy monja .
Manao sorona ny filaminan-tsainy ireo mpikatroka mafàna fo amin'ny fikarakaràna ireo hetsika tselatra atao am-pilaminana sy fanoherana fanonganam-panjakana mba hiakiana ny famerenanany fitondràna ho amin'ny sivly amin'ny alàlan'ny fifidianana demaokratika, na dia tsy mbola nahazo fanampiana na fanambaràna fanohanana avy amin'ireo antoko politika lehibe ao amin'ny firenena aza ry zareo.